လာမည့် မတ်လ(၂၇)ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် (၆၆)နှစ်မြောက် တပ်မတော်နေ့ အခမ်းအနားအား နေပြည်တော်၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည် မဟုတ်ပဲ.. ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းများ၌သာ ကျင်းပမည်... ~ ဒီမိုဝေယံ
လာမည့် မတ်လ(၂၇)ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် (၆၆)နှစ်မြောက် တပ်မတော်နေ့ အခမ်းအနားအား နေပြည်တော်၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည် မဟုတ်ပဲ.. ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းများ၌သာ ကျင်းပမည်...
၂၀၁၀ခုနှစ်က ကြပ်ပြေးနေပြည်တော်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ (၆၅)နှစ်မြောက်
တပ်မတော်နေ့ အခမ်းအနားဓာတ်ပုံများ (AP)
ယခုနှစ်လာမည့် မတ်လ(၂၇)ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် (၆၆)နှစ်မြောက် တပ်မတော်နေ့ အခမ်းအနားအား ယခင်နှစ်များမှာ ကျင်းပပြုလုပ်နေကျဖြစ်သည့် နေပြည်တော်၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည် မဟုတ်ပဲ.. ယခုနှစ် မှစ၍ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းများ၌ ကျင်းပမည်.. ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်..။ ယခုလက်ရှိ နေပြည်တော်၌ လွှတ်တော် ခေါ်ယူကျင်းပ နေသော်လည်း.. စစ်တပ်၏ အမြင့်မားဆုံး အာဏာဖြစ်သည့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ရာထူးအတွက် မည်သူအား ခန့်အပ်မည်ဟု ကြေငြာနိုင်ခြင်း မရှိသေးခြင်း ကလည်း အဆိုပါ တပ်မတော်နေ့ အခမ်းအနားအား ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းများ၌ ကျင်းပရခြင်း၏ အကြောင်းရင်း တစ်ချက် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြည်တွင်းသတင်း သမားအချို့မှ သုံးသပ်ကြပါတယ်..။
စစ်အစိုးရ အာဏာသိမ်းပြီး အုပ်ချုပ်ချိန်မှ စ၍ ယခင်အစဉ်အလာ သုံးစွဲခဲ့သော တော်လှန်ရေးနေ့အား တပ်မတော်နေ့ဟု ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်..။ ယခင် တော်လှန်ရေးနေ့ အခမ်းအနားများအား ရန်ကုန်မြို့တော်ရှိ တော်လှန်ရေးပန်းခြံမှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
L.A.Organizers အဖွဲ့ရဲ့ မြန်မာပြည်အတွင်း ယုံကြည်ချ...
အမေ့အိမ် ပညာဒါနကျောင်းရဲ့ တရားဝင် မှတ်ပုံတင် လျှော...
Mr. Ross Dunkley အား ကမာရွတ် တရားရုံးမှာ ရုံးထုတ်စ...
ရွှေစက်တော်သွား တောလား (၂) (အမိမြန်မာပြည် အမှတ်တရ ဓ...
ရွှေစက်တော်သွား တောလား (၁) (အမိမြန်မာပြည် အမှတ်တရ ဓ...
The Voice ဂျာနယ်. 7-12
အစွယ်ကိုလိုသူ ကျော်ဆန်း အသွားစေခိုင်းသူ တင်ထွန်းဦ...
Brighton Festival 2011 မှာ ပြောကြားတဲ့ အမျိုးသားခေ...
ဂျပန်ပြည်တွင်း လှုပ်ရှားမှုများ.. (ဖိတ်ကြားစာ)
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ...
နအဖ၏ လျှို့ဝှက်တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းများ (၃)
အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ နော်ဝေန...
ABMA ဂျာနယ်.... Volume2No 4
လာမည့် မတ်လ(၂၇)ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် (၆၆)နှစ်မြောက...
ဂျပန်နိုင်ငံ နာဂိုယာမြို့မှာ ကျင်းပသည့် ၆၄ နှစ်မြေ...
The Voice ဂျာနယ်. 7-11
ပုပ္ပားအမှတ်တရ...(၂) (အမိမြန်မာပြည် အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံ...
ကနေဒါအခြေဆိုက် The Globe and Mail သတင်းဋ္ဌာနနဲ့ အမျိ...
ရောင်နီလာ နံနက်ခင်းဆီသို့ " ( အပိုင်း ၁မှ ၆) (ကိုေ...
သမိုင်းတွင်မယ့် သမိုင်းဝင် စစ်ကိုင်းမြို့ရဲ့ ကျက်သ...
ယခင်ဦးပိုင် ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အေး...
အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဂျာမန...
ပုဂံအမှတ်တရ.(၂) (အမိမြန်မာပြည် အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံ)
စင်္ကာပူရောက် မြန်မာများအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သြ...
မနေ့က တောင်ဒဂုံမြို့နယ် (၇၀) ရပ်ကွက်မှာ ကျင်းပပြုလ...
နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)၏ လူမှုရေး လုပ်ငန်းများ.....
( ၆၄ ) နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနား (ကိုရီး...
ဥက္ကံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လူသတ်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး...
ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ (၆၄)...
(၁)နှစ်သား “သုခအလင်း” စာကြည့်တိုက်..
(၉၆)နှစ်ပြည့် ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့.. အမှတ်တရ.. (ဓာတ်ပ...
(၆၄)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအ...
ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၂)ရက်နေ့ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာ ပြုလုပ်တ...
ယနေ့ ကြပ်ပြေးနေပြည်တော်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ (၆၄)ကြ...
(Weekly Eleven News သတင်းပါ ) ဆိုမာလီ ပင်လယ်ဓားပြမ...
ပြည်တွင်းမှ အခမ်းအနား ဓာတ်ပုံများ....
၁၈ ရက်ကြာ ဆန္ဒပြပွဲများ ဖြစ်ပွားအပြီး အီဂျစ်သမ္မတ မူ...
အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံမှ ဂျပန်ေ...
ဒီမိုဝေယံဘလော့(ဂ်) မဲဝဲလ်(malware) ကင်းရှင်းပါကြော...
NTDTV သတင်းဋ္ဌာနက ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့ ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှု...
အနာဂါတ်ကို ဘယ်သူ ကြိုသိနိုင်သလဲ (ကိုမောင်မောင်ဝမ်း...
ဖေဖော်ဝါရီလ (၈)ရက်နေ့က သင်္ဃန်းကျွန်း ၁၆ ရပ်ကွက်မှာ ...
အလင်းအိမ်မဂ္ဂဇင်း (၅)နှစ်မြောက် ဝတ္ထုတိုပြိုင်ပွဲနှင...
စစ်မှုမထမ်းမနေရ အမိန့်နှင့် တတိုင်းတပြည်လုံးအတွက် အ...
ပုဂံအမှတ်တရ... (အမိမြန်မာပြည် အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံ)
စစ်အုပ်ချုပ်ရေး (၂၃)နှစ်တာ ကာလပြီးနောက် ပေါ်ပေါက်လာ...
ဆိုမာလီယာ ပင်လယ်ဓားပြများ ဖမ်းဆီးထားတဲ့ ထိုင်းငါးဖ...
အောင်မြင်မှုနဲ့ စွမ်းဆောင်မှု - လူထုစိန်ဝင်း
ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့မှာ ပြုလုပ်တဲ့ ၆၄-ကြိမ်ြေ...
ယနေ့ ယုဇနပလာဇာမှာ ပြုလုပ်တဲ့ Mr & Miss Yuzana 2011...
The Voice ဂျာနယ်. 7-9
ဘယ်နိုင်ငံမှာ ဘယ်သူတွေ ဘာအတွက်လဲ....???
ကျိုက်ထီးရိုး (၂) (အမိမြန်မာပြည် အမှတ်တရ)
ရောင်နီလာ နံနက်ခင်းဆီသို့ " ( အပိုင်း ၁မှ ၅ ) (ကို...
ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်နှင့် ဒုတိယပင်လုံ ညီလာခံအကြောင်း...
မြန်မာစစ်အာဏာရှင်များက နိုင်ငံတော်သမတအဖြစ် ဦးသိန်...
သင်တို့ ဘယ်လို ယူဆနေကြလဲ?
ကျိုက်ထီးရိုး၊ ကျောက်ထပ်ကြီး (အမိမြန်မာပြည် အမှတ်တ...
Blink Hacker Group ကြေငြာချက်...
တောင်ဒဂုံ လူငယ် အမျိုးသမီးများ ပေါင်းစုတင်ပြချက်.....
မနေ့က ကြပ်ပြေးနေပြည်တော်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ တံခါးပိတ် လ...
သတင်းမီဒီယာသမားများအား လွှတ်တော်အဆောက်အဦး အတွင်းသိ...